Nzaghachi ndị ahịa - Ningbo Huayu Network Technology Co. Ltd.
Ekele dịrị ndị nkuzi Nomi Chinese n'ịntanetị. Ebe ọ bụ na m ga-elekọta nke ọdụdụ nwa, enweghị m ike ịga n'ihu na-azụ ụmụ m ndị ọzọ.
Nwanyị Zhu enyerela m aka nke ukwuu. Kidsmụ m na-amụrụ ya ihe karịrị otu afọ. Ugbu a, ha nwere ike ịgụ akụkọ n’onwe ha ma nwee ike ịgwa m okwu nke ọma na Chinese n’ụlọ.
- Mama Yihan
Ọ na-amasị klaasị Ding nke ukwuu, yana Ding na-enwe ike ịdọrọ uche ya na klaasị ahụ. Ọ na-adịkarị nwayọ nwayọ mgbe ọ na-arụ ọrụ e nyere ya. Ugbu a, ọ ga-emecha ihe omume ụlọ akwụkwọ China ya ozugbo ọ gụsịrị klas na anaghị m mkpa ilekọta ya ọzọ.
—— Mama Jay
Enwere m ekele maka Oriaku Hu. N'oge gara aga, ọ na-ewe Leo ihe dị ka otu elekere iji mee mgbakwunye na mwepu na mgbakọ na mwepụ. Mgbe omumu ihe ya na nwaada Hu maka onwa abuo, o puru imezu nsogbu nguko onu ego nke di na nkeji iri ma ezi onu ahia di kwa oke. Enwere m olileanya na mgbakọ na mwepụ Leo nwere ike ịka mma na enweghị m ike iche maka ya ọzọ.
—— Mama mama Leon
O tolitere na United States na enweghị ndị enyi China nọ ya gburugburu. Ya na nne na nna ya enweghị ike ịkparịta ụka mgbe anyị laghachiri China n’oge gara aga. N'afọ a, m ga-akpọghachite ya iji ju nne na nna ya ochie anya! Ekele diri nwada Han maka enyemaka ya na ndidi ya na Raymond, daalụ nke ukwuu!
—— Mama Raymond